Barcelona vs Barcelona Atletico Madrid - Warbixinta ciyaaraha kubada cagta - 6 April 2019 - ESPN - TELESHO RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Barcelona vs Chelsea Atletico Madrid - Warbixinta ciyaarta kubadda cagta - 6 April 2019 - ESPN
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisii ​​labaad ee Barcelona Sabtidii. Alex Caparros / Getty Images
Lionel Messi Rikoor cusub ayaa dhigay La Liga xilli Barcelona ay sii kordhisay hogaanka horyaalka ee 11 iyadoo 2-0 ay ku badisay Atletico Madrid ciyaartii 10 ragga ee Camp Nou sabtidii.
Diego Costa ayaa qaatay casaan casaan ah qeybtii hore ee ciyaarta garsoore Jesus, taasoo keentay garsoore Jesus Gil Manzano oo ah inuu garsooraha Diego Simeone ka dhigo ciyaar ay tahay inuu ciyaaraha ka fariisto. rajeynaya.
Atletico ayaa qaab ciyaareed wanaagsan sameysay qeybtii labaad ee ciyaarta, Barca ayaa si wacan iskula qabatay, lakiin Catalans ayaa ugu dambeyntii raadineysa goolhaye aad u fiican Jan Oblak iyadoo uu goolka barbaraha ka dhaliyay Suarez daqiiqad 85e.
Daqiiqado ka dib, Messi laga shaabadeeyey laba guul iyo u badan tahay horyaalka League la dhammayn ah loogu tuurina qabow galay goolka iyo taageerayaasha Barca gleefully Mareen "kooxda heysata horyaalka", kuna tasbiixsan mahadda hogaanka shaki hogaanka toddoba kulan u ciyaaro. ] Atlet Si joogaan tartanka horyaalka, ico loo baahan yahay inay ka badiso Camp Nou markii ugu horeysay tan iyo 2006 oo ay soo ciyaaray hamiga iyo sirdoonka ku jira marxaladaha hore, ilaalinta kubada muddo dheer oo loo diiday Barca ee bannaan.
waxaa lagu riyoodaa Costa oo ah maskax gaabis ah oo hakad geliyay kacdoonkii hore waxayna ka tagtay kaliya xulashada difaaca inta ka dhiman ciyaarta.
Weeraryahan Costa ayaa si bareer ah uga carooday isagoo aan lagu eedeynin ka dib markii uu soo weeraray . Jordi Alba waxaana uu siiyey jawaab dheer oo hadal ah oo garsooraha ah, kaasoo si fantastik ah uga baxay casaan casaan.
Costa waa in laga saaraa garoonka Gerard Pique ee Barca sida uu ugu dhibtooday inuu xakameeyo. dareenkiisa asxaabtiisa Diego Godin et Jose Gimenez waxay amar ku bixiyeen in ay farageliyaan xanaaqooda go'aanka.
Messi ayaa labo jeer ku soo bilowday garoonka dhexdiisa, isagoo abuuray fursado uu Suarez iyo isaga laftiisa, laakiin labadii weeraryahan ee South America ayaa ka careysnaa kubada cagta ee Oblak.
Atletico Antoine Griezmann qabsaday Rodrigo lakiin xitaa khadka dhexe ayaa hogaaminayay booska markii Gimenez uu ku soo bilowday. Wuxuu, meel fiican.
Ciyaartoyda Diego Simeone ma ahan kuwo daba-dheer oo lugaha ah, oo ah tayada weerarka ee Barcelona ayaa isbedeleysa.
Guushaan waxay ku guuleysatay 335th ee horyaalka La Liga ee loogu magac daray xiddiga reer Argentine. , isagoo ka soo kabsanaya goolhayihii hore ee Real Madrid Iker Casillas liiska waqtiga oo dhan
Horyaalka difaacaneysa horyaalka La Liga ayaa haatan leh dhibco 73 kulamada 31, halka Atletico oo kaalinta labaad ku jirta ay ku jirto kaalinta 62.  Warbixinta Reuters ayaa loo isticmaalay warbixintan.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=521613